လူသားအားလုံးအတွက်: ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, June လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ....
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, June လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ....
2011, June လ အတွက် တစ်လတာ ဗေဒင် ဟောစတမ်း .... ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် ဆရာမျိုးဟန်ကို ... 2011, June လ အတွက် တစ်လတာ ဗေဒင် ဟောစတမ်း .... ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် ဆရာမျိုးဟန်ကို ...
ဒီလတွင်း ရည်ရွှက်ချက် များ အဆင်ပြေလာမည်။ အအလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အရင်ထက် အဆင်ပြေလာမည်။ အလုပ်အတွက်နဲ့ အနည်းငယ် စိတ်ချမ်းသာမှု ရရှိလာမည်။ အလုပ် ပြောင်းလိုသော စိတ်ကူးဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေမည်။ မစုမိသေးပါ။ ရသမျှ ကုန်နေမည်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအသစ်များ ရရှိမည်။ မိသားစုအတွင်း နာရေးကိစ္စများပေါ်မည်။ ပညာရေး အဆင်ပြေလာမည်။
ဒီလအတွင်း ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်မည်။ စကားပြောဆိုမှု အဆင်မပြေပါ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကံကောင်းပြီး အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။
ဒီလအတွက် ကျန်းမာရေးမှာ ဦးခေါင်းပိုင်း ထိမိခိုက်မိဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် အုန်းသီး ၆ စိပ်ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။ 8 145
ဒီလအတွင်း ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးပါ။ မျှော်လင့်နေသော ရည်ရွှက်ချက်များ အောင်မြင်မှု လမ်းစ ပေါ်လာမည်။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အောင်မြင်မှု ရလာမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာမည်။ လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်။ ငွေဝင်မည်။ ငွေကံကောင်းလာမည်။ စမ်တူကိစ္စများ အဆင်ပြေလာမည်။ လူမှုရေးကိစ္စများ အဆင်မပြေပါ။ မိမိနဲ့ ခင်မင်သူများနဲ့ စကားများရမည်။
မိသားစုတွင်း အဆင်ပြေလာမည်။ ပညာရေး တိုးတက် ကံကောင်းပါသည်။
အချစ်ရေးကိစ္စများ ပြသာနာတွေ ဘယ်လိုပဲပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ အခုအချိန်မှာ အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။
ယခုလ အတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ စိတ်ပင်ပန်း ကိုယ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္လာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ကြက်မောက်သီး ၁၅ လုံးကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလ အတွက် ကံကောင်း အကျိုးပေး သောဂဏန်းများ ။ ။5152
ယခုလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာ များ ပုံမှန်လေး လည်ပတ်နေသော အချိန်လေးပါ။ ယခုလအတွင်း စိတ်ညစ်မှု များနေမည်။ အလုပ်အတွင်း အဆင်ပြေနေသော်လည်း ရန်အတိုက်အခံ ပေါ်မည်။
ဒီလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ရသလောက် ဝင်နေမည်။ ဝင်သလောက် ထွက်နေမည်။ လူမှုရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။
လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ဝင်မည်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အသစ်ရရှိမည်။ မိသားစုအတွင်း ကျန်းမာရေးညံ့မည်။ ပညာရေး တိုးတက်လာမဲ့ လမ်းစပေါ်မည်။ ပညာရေး ကောင်းပါသည်။
အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေမည်။ ပျော်နေရသော်လည်း အနည်းငယ် စိတ်ညစ်မှု ကြုံမည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားများနေရမည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ မျက်စိအားနည်း ၊ အအေးမိခြင်း ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် စပျစ်သီး ၈လုံး ၈ခိုင် ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။ 145 8
ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်မပြေသေးပါ။ ရည်ရွှယ်ချက်များ ကြန့်ကြာနေမည်။ အလုပ်ထဲတွင် စိတ်ညစ်မှုကြုံနေမည်။ စကားပြောဆိုမှု အဆင်မပြေပါ။ ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။
မိမိ မမျှော်လင့်သော ငွေကြေးများကြန့်ကြာနေမည်။ အကြွေးတင်မည်။ စမ်တူ ကိစ္စများကို ယခုလအတွင်း ရှောင်ပါ။ ခရီးယာယီများ သွားနေရမည်။ ပညာရေး ကံညံ့နေမည်။ မိသားစု အတွင်း ငွေဝင်မည်။
အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ ပြသာနာလေးတွေ ရှင်းနေရမည်။ အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြည်နူးနေရမဲ့ အချိန်လေးပါ။
ယခုလ ကျန်းမာရေးမှာ ခြေထောက်နာမည်။ အားနည်းမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် လိမ္မော်သီး ၁၇ စိပ် ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။5241
ဒီလအတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေနေမည်။ ရည်ရွှယ်ချက်များ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါ။ အလုပ်ကိစ္စများအတွက် အဆင်ပြေနေသော်လည်း အလုပ်ထဲတွင် စကားပြောဆိုမှု အဆင်မပြေသေးပါ။
ငွေကြေးကိစ္စများ ဝင်မည်။ ရလိုက် ကုန်လိုက် ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် ဖြစ်နေမည်။ မိမိသုံးနေသော စက်ပစ္စည်းများ ပျက်မည်။ မိသားစု အတွင်း ပျော်စရာများ ကြုံမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ကူညီပေးသူ ပေါ်မည်။ ပညာရေး ကိစ္စများ ရည်မှန်းချက် အသစ်ပေါ်မည်။ ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်ပြေ ပါသည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ချစ်သူ အဟောင်းရော ချစ်သူအသစ်ပါ အဆင်ပြေပါသည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ရန်စကား များနေရမည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ လက်နာမည် ၊ အပူလောင်မည် ဂရုစိုက်ပါ။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ပန်းသီး ၁၉ စိပ် ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။5125
ဒီလအတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်များ အဆင်မပြေပါ။ ရည်မှန်းချက်များ နှင့် မိမိ လုပ်ဆောင်မှုများ ကြန့်ကြာနေမည်။ အထက်လူကြီးများ နှင့် ပူးတွဲလုပ်ဆောင် ပါက စကားပြောဆို ဂရုစိုက်ပါ။ စိတ်ညစ်မှုများ ရှိနေသော်လည်း ကူညီပေးသူ အကြံညဏ်ပေး သူပေါ်မည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ထီကံကောင်းပါသည်။ ရုတ်တစ်ရက် ငွေဝင်မည်။ မိသားစု အတွင်း ဘာသာရေး ကိစ္စများ ပြုလုပ်ရမည်။ ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်မပြေပါ။
ပညာရေးကိစ္စများ သင်တန်းကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။
အချစ်ရေးကိစ္စများ အထင်လွဲနေမည်။ ဘေးစကားတွေနဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး စိတ်ညစ်နေရမဲ့ အချိန်လေးပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားများနေရမည်။ အိမ်ထောင်ဖက် ကျန်းမာရေးညံ့မည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် သောကြာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် သရက်သီး ၂၁ စိပ် ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။4750
အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ ယခုလအတွင်းမှာ အဆင်ပြေနေသော်လည်း အလုပ်ထဲတွင် စိတ်ညစ်မှုများ ဖြစ်နေမည်။ အလုပ်ပြောင်းလိုသော စိတ်ကူးဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ငွေကံကောင်းပါသည်။ ရုတ်တစ်ရက် ငွေဝင်သလို ရုတ်တစ်ရက် ငွေကုန်မည်။ ကြွေးတင်မည်။ စက်ပစ္စည်း ဝင်မည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ အသစ်ဝင်မည်။ မိသားစု အတွင်း အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက်လာမည်။ ညအိပ်ညနေ ခရီးယာယီ သွားရမည်။
အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေလည်း စိတ်ပူစရာ မရှိပါ။ ပြန်လည် အဆင်ပြေလာမည်။ ယခုလ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေမည်။ အဆင်ပြေပါသည်။
အခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ခါးနာမည် ၊ ခြေထောက်နာမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် စနေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် နာနတ်သီး ၁၀ စိပ် ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ကံကောင်းသော ဂဏန်းများ ။ ။5420
2011, June လ တွင် မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း (၁၁) မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။
2011, June လ တွင် မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း (၁၁) မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ ဆက်သွယ်ရန် ... ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် ဆရာမျိုးဟန်ကို - NO. 314 , Block P/B , Jin Cheras Taman Cheras ,56100 Kuala Lumpur Malaysia - http://www.myohanko.br.ms -myohankonew@gmail.com - Ph; 016, 606 1917 , 017, 226 0715 ... စေတနာ မှန်၍ စိတ်ကောင်း ထားတတ် သူတိုင်း ကံကောင်း ကြပါစေ......
Source by :http://myohanko4all.tk/
Posted by နေဇော် လင်း at 10:31 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တိုက်နံရံနဲ့ အဲယားကွန်းကြားမှာ ညှပ်မိနေတဲ့ ကလေးငယ်...
မြန်မာဇတ်ကား ကြည့်ရှုရန် - 1
မလေးတွင် တရားဝင်နေခွင့် စတင်တော့မည်
ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများ အားလုံး အင်တာနက် အသုံးပြုခွင...
ကိုယ်ဝန် ၄ လ လွယ်ထားရက်နဲ့ နေတိုး၊ ပြေတီဦးတို့နဲ့ ...
TV ရီမုအတွက် ကွာရှင်း​ကြသည့်​ တရုတ်လင်မယား​
မြန်မာသင်္ဘောသားများ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက် တာဝန်...
အရှင် ဉာဏိဿရ ညီညွတ်ရေးတရားဟောမည်
စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အတိုးနှုန်း သက်သာစွာ ငွေချေးန...
အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး ကျပ် ၇၄၀ အထိ ကျဆင်းလာ
ပါကစ္စတန် ဈေးတစ်ခုတွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှု နှစ်ခုကြောင်...
စိတ်ညစ်နေ စိတ်ဓာတ်ကျနေသော သူငယ်ချင်းများ အတွက်ပါ
မလေးရှား လေဆိပ်တွင် လက်ဗွေရာယူမည်
သုံးပွင့်ဆုိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကြောင့် မြန်မာလူငယ် တ...
မြန်မာ့ အွန်လိုင်း ရေဒီယို Player Gadget ရယူရန်
မြန်မာက သူငယ်ချင်းများအတွက် Proxy site များ ...
၁၁ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအား ၁၈ နှစ်ကြာအကျဉ်းချ ထားပြီ...
အွန်လိုင်းမှ ၂၄ ဘာသာကို မြန်မာလို ပြန်နိုင်ပြီ ......
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, June လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း...
ကွမ်းယာဆိုင်အချို့တွင် လျှို့ဝှက်ရောင်းချနေသော လိင...
ဗြိတိန်တွင် ကျား​ဖြူ​အရုပ်​ကြောင့်​ ရဲတပ်ဖွဲ့​​အကြ...
Gmail offline mode အား အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်